कंगना भन्छिन्- ‘बलिउड ड्रग्स, कृपावाद र शोषणको गटर हो’ - AP Khabar
एपी खबर२०७७ आश्विन २७, मंगलबार (१ हप्ता अघि) २३ पाठक संख्या
नयाँ दिल्ली– कंगना रनावतले एकपटक फेरि बलिउड ईन्डस्ट्रीमा हमला गरेकी छन् । पछिल्ला समयमा उनले इडंस्टीमा फैलिंदो नाताबाद, कृपावाद र लागूपदार्थको बारेमा कडा बयान दिएकी छिन् । स्टारकिडहरु र कलाकारहरुलाई लक्षित उनले गरेकी छन् ।
बलिउडका धेरै जसो सुपरस्टार प्रोडक्शन हाउसले शीर्ष मिडिया कम्पनीहरूलाई बदनाम गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका छन् । यसको साथै, बलिउड स्ट्राइकस बैक ह्यास्टयाग सोशल मीडियामा ट्रेंड गर्न थालेको छ । कंगनाले फेरि एकपटक बलिउड उद्योगलाई घेरा हालेकी छिन् र बलिउड स्टार्समा धेरै गम्भीर आरोप लगाएकी छिन् ।
कंगानाले ट्वीटमा लेखेकी छिन्– बलिउड ड्रग्स, शोषण, नेपेटिज्म र जिहादको गटर हो । यसलाई सफा गर्नुको सट्टा, बलिउड स्ट्राइक बैक जस्ता ह्यास्टयाग प्रयोग भइरहेको छ । म भन्छु, मेरो विरुद्धमा पनि मुद्दा हालिदिनुहोस् । जबसम्म म जीवित छु म तिमीहरुको सबैलाई पर्दाफास गर्नेछु ।’
उनले आफ्नो अर्को ट्वीटमा भनिन् – ‘ठूला तारेले न केवल महिलालाई आपत्ति जनाउँदछन् र केटीहरूको शोषण पनि गर्छन् । उनीहरूले सुशांत सिंह राजपूत जस्ता युवा ताराहरूलाई उदाउँदैनन् । ऊ ५० वर्षको उमेरमा स्कूलका बच्चाहरूको भूमिका खेल्न चाहन थिए ,यदि उसको अगाडि केही गल्ती भइरहेको छ भने पनि उसले कसैको पक्ष लिदैन् ।’
कंगनाले अर्को ट्वीटमा फिल्म इडंस्टीमा एउटा अलिखित कानून रहेको भन्दै लेखेकी छन्– ‘तिमीले मेरो फोहोर रहस्यहरू लुकाउ र म तिम्रो लुकाउनेछु । यो तिनीहरूको वफादारीको एक मात्र उपाय हो । जबदेखि म जन्मिएको थिएँ, मैले यी फिल्म परिवारहरूमा केहीले यो इडंस्टी चलाइरहेको देखें । आखिर यो कहिले परिवर्तन हुन्छ ?’
कंगनाले अगाडि लेखिन्– ‘म धेरै बर्षदेखि बलिउडमा शोषण र बदमाशको बारेमा गुनासो गर्दै आएको छु, आज त्यसका कारण एक कलाकारको मृत्यु भयो । यदि सुशांतको मृत्युको कारण बलिउडको नाली सफा भइरहेको छ भने उनीहरूलाई किन यति धेरै दुःख के भइरहेको छ ? मसँग पनि यसका लागि सबै हिसाबहरु छन् ।’
कंगनाले सुशांतको फोटो राख्दै ट्वीट गरी भनेकी थिइन्– ‘बालिवुडको फोहोरमा घुमिरहेकाहरूलाई कस्तो हुन्छ जब देशको अगाडि अपमानित, लक्षित, बनाइन् छ, एक्लै हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ । लुक्दै वा भागेर जाने जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? तिमीहरु बगाले ब्वाँसोहरू हौं, केवल एकलै मरु जस्तो लाग्छ, हैन?’
आइतबार कुन-कुन राशिका लागि फलदायी ?